…toa lelon-jaza . | mandimby maharo
…toa lelon-jaza .
Posted on 26 March 2012 26 March 2012 by Mandimby Maharo
Samy nahatsikaritra isika rehetra fa maro no zavatra nolazain’ny Filohan’ny Fahefana avon’ny tetezamita no mifanohitra nandritra ilay fandaharana « l’invité du Zoma » ny 23 Marsa 2012 teo.
Teo ohatra ny nilazany ny tsy tokony itakiana ireo tombotsoa maro tsy azo hatrizay amin’izao tetezamita izao nefa avy eo izy ihany no namaly fa afaka notanterahina ny fitakian’ny miaramila. Nekena io satria ampahefan’ny vola tokony haloha ho an’ny mpampianatra mpikaroka ny azy ireo ; dia misy tombo sy hala ve zany ny mpiasam’panjakana eto amin’nity fitondrana ity ka misy mahazo mitaky ary misy tsy mahazo miteny ?
Teo koa ny nilazany fa anisan’ny nandratsa-bato ho an’ny Amiraly Didier Ratsiraka izy tamin’ny fifidianana 1996 raha niverina teo amin’ny fitondrana io filoha io taorian’ny famonoan’olona ny 1991. Nefa izy ihany koa no manda mafy fa tsy tokony hisy mpitondra hiverina intsony raha nandatsaka ain’olona. Dia rehefa mety aminy ve izany ka nahazoany tombony dia tohanany fa rehefa manao izay mety amin’ny hafa dia tsy azo ekena ?
Anisan’ny tsy aritra koa ny nireharehany amin’ireo zava-bita. Eo ny kianja filanoanana sy fampisehoana eny Antsonjobe. Ekena fa ilaina izany saingy toa mampatsiahy ilay fomba fiteny taloha ka anaovana indray ankehitriny hoe Antsonjobe angaha fihinana ka hahavoky? Teo ihany koa ny fanekeny fa nahavita dingana ny firenena nanao ny tondrozotra izay tokony hotanterahana antsakany sy andavany saingy rehefa anontaniana izy ny amin’ny fampiharana andininy sasantsasany ao dia miahotra ihany.
Ny hany azo sontonina amin’niny fandahatana iny dia ny hoe tena mahay, ary tena talentan’ingahy Andry Rajoelina ny miala andraikitra. Raha nanontaniana izy fa toa tsy misy fanjakana eto dia nirehareha ary tena nampihetsika ny hambom-pony mihitsy ka niteneneny fa izy manoloana anareo izao no lohan’izany fanjakana izany. Nefa rehefa nanontaniana momba ny tsy fetezan’draharaha rehetra ankehitriny izy dia natsimpiny any amin’ny olona akaiky azy sy mpiara-mitantana izany. Dia nanamarina ihany koa io ilay voalazan’ingahy Lehiben’ny Congresy hoe te hifidy ny lohany nefa matahotra ny masony.